जीवनशैली Archives - Sawal Nepal
काठमाडौं। व्रत (उपवास) नेपाली समुदायमा नौलो होइन। विभिन्‍न देवी देवताको उपासना गरेर हप्ताको निश्‍चित बार व्रत बस्‍ने चलन छ नेपाली समुदायमा। पछिल्लो समय भने उपवासको क्रम चले पनि उद्देश्य फरक छ। धार्मिक आस्थाका कारण भन्दा पनि मानिसहरू स्वास्थ्यका लागि व्रत बस्‍न थालेका छन्। मोटोपन घटाउन होस् वा अन्य स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्‍न, यस्तो उपवास उपयोगी बन्‍ने
पानीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छ?
पानी मानिसको जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। पानीले पोषक तत्व र खनिजलाई शरीरको विभिन्न ठाउँमा लिएर जान्छ र विषाक्त पदार्थ र विकारहरुलाई बाहिर निकाल्छ। यो भन्दा बाहेक पानीले शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रित राख्न मद्दत गर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र पानीको सम्बन्ध सामान्यतया यदि मानिस बिरामी हुन्छ अथवा मानिसलाई ज्वरो आउँछ, त्यतिबेला मानिसलाई प्रशस्त पानी पिउने सल्लाह दिइन्छ।
यो पढेपछि तपाइले केराको बोक्रा कहिल्यै फ्याल्नु हुन्न
केरा खाएर यता उता बोक्रा फाल्ने तपाईको बानी छ भने त्यसलाई बदल्नुहोस । किनभने केराको बोक्रामा भरपूर मात्रामा पोषक तत्व र कार्बोहाइड्रेट हुन्छ । विशेषज्ञका अनुसार केराको बोक्रालाई पिसेर त्यसको पेस्ट दुखेको ठाँउमा १५ मिनेटसम्म लगाएर राख्नाले टाउको दुखेको निको हुन्छ । रगतको धमनीमा पैदा हुने तनावको कारण टाउको दुख्ने गर्छ यस्तोमा केराको बोक्रामा रहेको म्याग्नेशियम
कोरोनासँग लड्ने क्षमता कसरी बढाउने ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई नोबेल कोरोना (कोविड१९)को अति जोखिम रहेको क्षेत्रका रूपमा राखेपछि आम नागरिकमा यो रोगका बारेमा चासो बढेको छ । कतिपय डाक्टरहरूले यसबाट आत्तिनु नपर्ने बताइरहेका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले कोरोनासँग लड्ने क्षमता बढाउने उपायहरू बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेस्बूकमा लेख्दै कोरोना भाइरससँग लड्न शरीरको इम्युनिटी पावर कसरी
काभ्रेमा ८० बर्ष यताकै भिषण बाढी, पुलहरू बगाए, बस्तीहरु डुबे
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–७ मा रहेको पुण्यमाता खोला र विहावर (रोशी) खोलामा रहेको दुईवटा पुल बाढीले बगाएको छ । पनौतीको त्रिवेणीघाट तथा ऐतिहासिक मन्दिर इन्द्रश्वरलगायत पनौती पुरानो बजार आवतजावत गर्ने तथा वडा नं ७ र ६ सङ्कटा जोड्ने पुल बगाएको छ । त्यस्तै वडा नं ७ र ९ वृद्धाश्रम अगाडि भीमसेनस्थान जोड्ने पक्की पुल
भारतको झुला घाटमा ३सय नेपालिहरु अ’लपत्र – ‘प्रहरीले ल’ट्ठी हान्छ, गाउँलेले ह’सिँ’या’
बैतडी । सिमानाका भारतको झुला घाटमा करिब ३सय नेपालिहरु अलपत्र परेका छन् । बिगत ५ दिनदेखि उनीहरु भोक भोकै छन् । भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्ने उनीहरु घर फर्किन भनी आएकोमा सिमानाका बन्द हुँदा ओढारमा दिनरात कटाइ रहेका छन् । कसैकसैलाई भारतीय गाडीहरुले छोडेर गएको हो भने कोही हिँडेर आएका हुन् । उनीहरु झुलाघाटमा पुग्ने
काठमाडौं । बरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापाको निधन भएको छ । ८३ वर्षका थापाको उपचारका क्रममा नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो । थापालाई बुधबार बेलुकी स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । उनको उपचारका क्रममा बिहीबार दिउँसो १२ बजे निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार पीसीआर परिक्षणका लागि उनको स्वाब संकलन
यस्ता धनी नहुनुका कारण !
फिडेलिटी इन्भेस्टमेन्ट्सको अध्ययनअनुसार ८८ प्रतिशत करोडपति स्वनिर्मित हुन्छन्। केवल १२ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिका कारण धनी मानिसहरुको वर्गमा पर्छन्। धनी हुने सपना सबैको हुन्छ तर थोरै मानिसहरु मात्र त्यो ८८ प्रतिशत भित्र अटाउन सक्षम हुन्छन्। आखिर किन ? धनी नहुनुका कारण धनी हुन नसक्नुका धेरै कारणहरु हुन सक्छन्। यस्तोमा निम्न कारणहरू माथि छोटो वर्णन गरौँ। –पर्याप्त
घर आगनमा आफै उम्रने तथा हिन्दुहरुले नित्य पूजा गर्ने तुलसी बहु उपयोगी औषधीय गुणयुक्त वनस्पती हो । यसको प्रयोगले कैंयौ प्रकारका जटिल रोगसहित साधारण स्वास्थ्य समस्या समेत निको हुन्छ । १. तुलसीमा कीटनाशक शक्तिहुने भएकाले तुलसीको पातको लेदो बनाई घाउ, सुन्निएको तथा दुखेको ठाउँमा लेपको रूपमा लगाउँदा लाभ मिल्छ । २. ५ देखि १० एमएल
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले लकडाउन खोलेर पनि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सकिने उपाय सुझाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा विचार व्यक्त गर्दै डा. पाण्डेले व्यक्तिगत सुरक्षाका उपाय र नियमित सरसफाइमा ध्यान दिए संक्रमणबाट बच्न सकिने बताएका छन् । ‘विकसित तथा सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध भएका देशहरूले सबै बर्गलाई आआफ्नो क्षति न्यून गर्न ठोस राहतको